Kafesi | Shanyira Hultsfred
musha » Idya & inwa » Kafesi
Iwe haufanire kupotsa Café Yakatsemurwa paunoshanyira nzvimbo yeKambani. Iyo café inoitwa isiri-purofiti nesangano uye inopa kune zviitiko zvesangano. Pano unogona kutenga ice cream kana
Iyo Chocolate Paradhiso
Chitoro muHultsfred chinotengesa dzakagadzirwa nemaoko chokoreti makeke, pralines, mustard uye zvimwe zvakawanda nemhando yepamusoro zvigadzirwa. Izvo zvigadzirwa ndezve zvinogadzirwa nekushinga kukuru uye rudo.
Pakati paMålilla neVirserum uchawana musha mudiki Flaten neBageriet Björkaholm.Pano iwe unobika padiki diki uye nemhando yepamusoro zvigadzirwa. Mabhanzi, mabheetete, pretzels
Café Centrum iri padhuze nemugwagwa weHultfred. Zviri nyore kuwana uye nenzvimbo dzakanaka dzekupaka padyo. Pano unogona kuzorora kofi kana kutenga nawo
Iyo café iri muVirserums Konsthall. Pano iwe unogona kutora kushanya kweiyo art gallery uye unokoshesa hunyanzvi uyezve unakirwe nekofi yakanaka. Pano
Papurazi Lida kunze kweJärnforsen, chizi inogadzirwa nehunyanzvi uye diki nzira. Mukaka uyu unobva kumurimi wemuno. Pedyo nemukaka pane chitoro chepurazi chine kaunda yechizi
Stegen wechipiri ruoko & kofi
Yakavharwa vhiki 29-30! Anotengesa midziyo yemumba, fanicha, zvinhu zvekare, mabhuku nezvimwe. Kubvumirana kuStegen muHultsfred! Iyo yechipiri-ruoko inotengeswa neresitorendi inogona kuwanikwa kumaawa ekuvhura kuchitoro Chipiri-China
Café Vatatu Sista
Café Tre Systrar idiki kahawa yekumusha ine yakagadzirirwa kugadzirwa, yakasikwa uye yemuno inogadzirwa mukutarisa. Pano iwe une mukana wekutenga mabasa emaoko nezvimwe zvinhu